12 Iconic Izithombe ezivela kwi-Hubble Space Telescope
Sayensi Uhlolo lokuSithuba
Kwiminyaka yayo kwi-orbit, i- Hubble Space Telescope ibonise izimangaliso ze-cosmic, ezivela kwimibono yeeplanethi kwisimo sethu sobusuku kwiiplanethi ezikude, iinkwenkwezi, kunye neendlwana ukuya kwi-telescope. Hlola imifanekiso ye-icon yeHubble.
I-Solar System yeHubble
Izinto ezine zezinto zelanga zenziwa yiHubble Space Telescope. UCarolyn Collins Petersen
Ukuhlolisiswa kwendlela yethu yokukhanya kwelanga kunye neHibble Space Telescope inikeza i-astronomers ithuba lokufumana imifanekiso ecacileyo, ebukhali behlabathi elikude, kwaye ukuwajonga ukuba batshintshe ixesha. Ngokomzekelo, uHubble uthathe imifanekiso emininzi yeMars (ngasentla ngasekhohlo) kwaye ibhaliwe ukubonakala kwexesha elibomvu kwiplanethi ebomvu ngexesha. Ngokufanayo, ubukele uSaturn osekude (ngasekunene), walinganisa umoya walo kwaye wenza utyalo lweenyanga zayo. I-Jupiter (ngasezantsi kunene) yinto ekuthandwa ngayo ngenxa yelifu layo elitshintshayo kunye neenyanga zayo.
Ukususela ngamaxesha, ii-comets zenza ukuba zibukeke zijikeleza ilanga. I-Hubble isoloko isetyenziselwa ukuthatha imifanekiso kunye nedatha yalezinto ezinqamlekileyo kunye namafu eengqungquthela kunye nothuli oluphuma emva kwabo.
Le ngqungquthela (ebizwa ngokuba yiComet Siding Spring, emva kokubheka i-observatory eyayisetyenziselwa ukuyifumana) ine-orbit eyithatha iMarta ngaphambi kokuba isondele kwi-Sun. UHubble wasetyenziselwa ukuthatha imifanekiso yeejethi ehluma kwi-comet njengoko ivuselela.
I-Nursery Nursery ebizwa ngokuba yiNtloko yeNkunzi
Ummandla wenkwenkwezi obonwa yiHubble Space Telescope. NASA / ESA / STScI
I-Hubble Space Telescope ibhiyozele iminyaka engama-24 yokuphumelela ngo-Ephreli 2014 kunye nomfanekiso we-infrared of nursery birth-nursery ohlala kwi-6 400-light-years away. Ifu legesi kunye nothuli emfanekisweni liyingxenye yefu elikhulu (i- nebula ) elibizwa ngokuba yi-Monkey Head Nebula (izazi zeenkwenkwezi ziluhlu njenge-NGC 2174 okanye i-Sharpless Sh2-252).
Ienkwenkwezi eziza kutshatyalaliswa ngokutsha (ngakwesokudla) zikhanyisa kwaye zikhuphe kwi-nebula. Oku kubangela ukuba iigesi zivutha kwaye uthuli ludumise ukushisa, okubonakalayo kwii-Hubble ze-infrared-sensitive sensors.
Ukufunda iimimandla zokuzalwa kweenkwenkwezi ezinjengalezi kunika i-astronomers ingcamango engcono yeendlela iinkwenkwezi kunye nezindlu zabo zokuzalwa eziguquka ngayo ixesha. Inkqubo yokuzalwa kweenkwenkwezi yinto enye, kude kube yilapho kwakhiwa iimbonakalo eziphambili ezifana neHibble Space Telescope, i-Spitzer Space Telescope , kunye neqoqo elitsha lemiboniso esekelwe phantsi, izazinzulu zazingakwazi. Namhlanje, bajonge kwiindawo zokubeletha ngeenkwenkwezi kwi-Milky Way Galaxy nangaphezulu.
I-Hubble's Fabulous Orion Nebula
Umbono we-Hubble Space Telescope we-Orion Nebula. NASA / ESA / STScI
I-Hubble Space Telescope iye yajonga kwixesha laseOrion Nebula kaninzi. Olu lukhulu lwamafu, olunezinkulungwane ezili-1,500 ukukhanya, lunye luyintandokazi phakathi kweenkwenkwezi. Kubonakala kwiso elinguye phantsi kweemeko ezintle, ezisesibhakabhaka esibhakabhaka, kwaye kubonakala lula kwiibinki okanye i-telescope.
Ummandla ophakathi kwendawo ye-nebula yindawo yokugcina i-stellar nursery, kwikhaya leenkwenkwezi ezi-3,000 zobukhulu nobukhulu obuhlukahlukeneyo. UHubble naye wakhangela kwi- infrared light , eyayifumanisa iinkwenkwezi ezininzi ezingakaze zibonwe ngaphambili ngenxa yokuba zafihliwe emafini kagesi kunye nothuli.
Imbali yonke yokubunjwa kweenkwenkwezi zase-Orion kule ndawo enye yombono: ii-arcs, iblobhu, iintsika, kunye namacongci omhlaba afana nomsiyi wecigar bonke bathetha inxalenye yebali. Iimoya ze-stellar ezivela kwiinkwenkwezi ezincinci zihamba nge-nebula ezungezile. Amanye amafu amancinci ayenenkwenkwezi ngeenkqubo zeeplanethi ezizijikelezayo. Iinkwenkwezi ezincinane ezishushu zenza i- ionizing (ivuselela) amafu kunye nokukhanya kwazo kwe-ultraviolet, kwaye iimoya zazo zomoya zivuthela uthuli. Ezinye zeentsika zefu kwi-nebula zingafihla iprotostars nezinye izinto ezincinci ze-stellar. Kukho na amaninzi amaninzi apha amaninzi apha. Ezi zinto zitshisa kakhulu kwiiplanethi kodwa zipholile ukuba zibe ziinkwenkwezi.
Izazi zeenkwenkwezi zisola ukuba iLanga lethu lizalwe efini yegesi kunye nothuli olunjengaleyo malunga ne-4.5 yezigidigidi zeminyaka edlulileyo. Ngoko, ngandlela-thile, xa sibheka kwi-Orion Nebula, sibheke kwizithombe zethu zentsana zeenkwenkwezi.
Ukuphuphuma kweGlubules yeGaseous
Umbono we-Hubble Space Telescope weeNdonga zeNdalo. NASA / ESA / STScI
Ngo-1995, izazinzulu ze-Hubble Space Telescope zakhupha enye yemifanekiso ethandwa kakhulu eyadalwa ngumboniso. " Iindlovu zeNdalwe " zibambe iingcamango zabantu njengoko zinikela ngombono osondeleyo lwezinto ezikhangayo kwindawo yokuzalwa kweenkwenkwezi.
Esi sibonakaliso, isakhiwo esibumnyama ngenye yeentsika emfanekisweni. Yikholamu yegesi ye-hydrogen epholile (i-athomu ezimbini ze-hydrogen kwi-molecule ngayinye) exutshwe nothuli, indawo apho izazi zeenkwenkwezi zicinga ukuba indawo inokwenzeka ukuba iinkwenkwezi zenze. Kukho iinkwenkwezi ezandula zifakwe ngaphakathi kweminwe-like protrusions ephuma phezulu kwiphepha. "Inyawo" nganye inkulu kunokuba isistim sethu selanga.
Le ntsika ihamba ngokukhawuleza phantsi kwefuthe elonakalisayo lokukhanya kwe- ultraviolet . Njengoko iyanyamalala, iiglobules ezincinci zegesi ezininzi ezifakwe kwifu ziyafunyanwa. Ezi zi "EGGs" -futshane kwi-"I-Evaporating Gaseous Globules". Ukwenziwa ngaphakathi ngaphakathi kweEGG ezinye iinkwenkwezi zamabriton. Ezi zinto zinakho okanye zingayi kuqhubeka ziba ziinkwenkwezi ngokupheleleyo. Kungenxa yokuba i-EGG iyayeka ukukhula ukuba ilifu lidliwe kude neenkwenkwezi eziseduze. Ukuqhekeza ukunikezelwa kwegesi iintsana kufuneka zikhule.
Ezinye iiprostars zikhula zikhulu ngokwaneleyo ukuqala inkqubo yokushisa i-hydrogen enegunya leenkwenkwezi. Ezi zi-EGGS ze-stellar zifunyenwe, ngokufanelekileyo ngokwaneleyo, "kwi- Eagle Nebula " (ebizwa ngokuba yi-M16), ummandla ojikelezayo weenkwenkwezi ohlala kwindawo engama-6 500-ukukhanya kwiminyaka eyi-6 500.
I-Ring Nebula njengoko ibonwa yi-Hubble Space Telescope. NASA / ESA / STScI
I-Ring Nebula yintando ehlala ixesha elide phakathi kweenkwenkwezi zeenkwenkwezi. Kodwa xa i-Hubble Space Telescope ibhekiselele ngeli lifu eliyandayo legesi kunye nothuli oluvela kwinkwenkwezi efa, lathi linika intsha entsha, imbono ye-3D. Ngenxa yokuba le nethi yeplanethi igxiliwe kuMhlaba, imifanekiso yeHubble ivumela ukuba siyijonge. Isakhiwo esibhakabhaka emfanekisweni sivela kwiigobolondo zegesi ekhanyayo, kunye ne-blue-ish white ephakathi kweyona nkwenkwezi efayo, etshayayo igesi kwaye iyenze itye. I-Ring ye-Nebula kwasekuqaleni izihlandlo ezininzi ngaphezu kwelanga, kwaye imiphefumlo yokufa kwayo ifana kakhulu noko iS Sun yethu iya kuhamba ngayo kwiminyaka embalwa yeebhiliyoni.
Ngaphandle kwezona zinto zinamaqondo amnyama kunye negumbi elityhutyhileyo, okwakusenziwa xa ukwandisa igesi elishisayo igxininiswa kwipetroli epholile elalikhutshwe ngaphambili yenkwenkwezi etshabalalisiweyo. I-scallops yangaphandle yegesi yaxelwa xa inkwenkwezi yayisanda kuqalisa inkqubo yokufa. Yonke le gesi yaxothwa yinkwenkwezi yokuqala phakathi kweminyaka engama-4 000 edlulileyo.
I-nebula ikwandisa ngaphezu kweeyure ezingama-43,000 ngeyure, kodwa i-Hubble idatha ibonisa ukuba iziko lihamba ngokukhawuleza kunokunyuka kwendandatho ephambili. I-Ring Nebula iya kuqhubeka ikwandisa enye iminyaka eyi-10 000, isigaba esifutshane ngexesha lobomi beenkwenkwezi . I-nebula iya kuba yi-fainter kunye ne-fainter ize idlule kwi-interstellar medium.
I-Cat Eye Eye Nebula
I-Cat Eye Eye planetary nebula, njengoko ibonwa yiHubble Space Telescope. NASA / ESA / STScI
Xa i-Hubble Space Telescope yabuyisela lo mfanekiso we- nebula we- NGC 6543 yeplanethi, eyaziwa ngokuba yi-Eye ye-Eye Nebula, abaninzi abantu baqaphela ukuba kubonakala ngathi "Iso leSauron" livela kwiNkosi yeeNgqungquthela zeeNgqangi. NjengoSauron, i-Eye ye-Eye Nebula iyinkimbinkimbi. Izazi zeenkwenkwezi ziyazi ukuba yinto yokugqibela yenkwenkwezi efa efana neLanga eliye lakhupha umoya walo wangaphandle kwaye yahluma ibe yinto enkulu ebomvu. Yintoni eyashiywe yenkwenkwezi ukuba ibe yintshontsho emhlophe, ehlala emva kokukhanyisa amafu angqongileyo.
Lo mfanekiso u-Hubble ubonisa iindandatho ezili-11 eziphathekayo zezinto eziphathekayo, iigobolondo zegesi ezikhupha kwiinkwenkwezi. Ngamnye impela ibhobho ejikelezayo ebonakalayo entloko.
Yonke iminyaka engama-1,500 okanye kunjalo, i-Cat Eye Eye Nebula yakhupha ubuninzi bezinto eziphathekayo, yakha iindandatho ezihambelana kunye nezidumba. Izazi zeenkwenkwezi zineengcamango ezininzi malunga nento eyenzekayo ekubangela ukuba "izilwanyana". Imijikelezo yomsebenzi wamagnetic ngokufanayo nomjikelezo welanga welanga ungayibeka okanye isenzo sesinye okanye iinkwenkwezi ezihamba kunye neenkwenkwezi ezifayo zingabangela izinto. Ezinye iindiyori ezingezinye ziquka ukuba inkwenkwezi ngokwayo iyayifaka okanye ukuba izinto zifakwe kakuhle, kodwa into eyenza amagagasi emafini kunye nothuli xa ehamba.
Nangona uHubble uye waqaphela le nto inomdla ngokuphindaphindiweyo ukuba athabathe ixesha elilandelelanayo lokunyuka emafini, kuya kuthatha iimbono ezininzi ngaphambi kokuba izazi zeenkwenkwezi ziqonde ngokucacileyo okwenzekayo kwi-Eye Eye Nebula.
Intliziyo yeqoqo le-globular M13, njengoko kubonwa yiHubble Space Telescope. NASA / ESA / STScI
Ienkwenkwezi zihamba kwiindawo ezininzi kwiinkqubo ezininzi. Ilanga lihamba nge- Milky Way Galaxy njengelinye. Inkqubo yeenkwenkwezi esondeleyo, inkqubo ye- Alpha Centauri , ineenkwenkwezi ezintathu: i-Alpha Centauri AB (leyo ibini ibhanari) kunye ne-Proxima Centauri, i-loner eyona nkwenkwezi esondele kakhulu kuthi. Ilala iminyaka engama-4.1. Ezinye iinkwenkwezi zihlala kumaqela avulekileyo okanye imibutho ehambayo. Kanti ezinye zikhona kwiziqwenga ze-globular, iqoqo elikhulu leezinkulungwane zeenkwenkwezi ezidibeneyo kwingingqi encinane yendawo.
Lo mbono weHibble Space Telescope yenhliziyo yeqoqo le-globular M13. Kule minyaka engama-25 000 ukukhanya kwaye iqoqo lilonke linenkwenkwezi ezingaphezu kwe-100,000 ezigqityiweyo kwiindawo ezili-150 zokukhanya. Izazi zeenkwenkwezi zasebenzisa uHubble ukuba zijonge ummandla ophakathi kwesi siqendu ukuze ufunde kabanzi ngeentlobo zeenkwenkwezi ezikhoyo apho kunye nendlela abadibana ngayo. Kule miba ebanzi, ezinye iinkwenkwezi zithelana. Isiphumo "inkwenkwezi yeblue blue ". Kukho neenkwenkwezi ezibukeka zibomvu, eziyimigqomo ebomvu yamandulo. Iinkwenkwezi ezimhlophe ezimhlophe zisesibhakabhaka zishushu kwaye zikhulu.
Izazi zeenkwenkwezi zinomdla ngokukhethekileyo ekufundeni i-globulars njenge-Alpha Centauri kuba ziqulethe ezinye zeenkwenkwezi ezindala kwindalo yonke. Abaninzi baqulunqwa kakuhle phambi kweGiley Way Galaxy, kwaye basenokusixelela ngakumbi ngembali yeli galaxy.
Cluster yePleiades Star
Umbono kaHubble weqela lePleiades elivulekileyo leenkwenkwezi. NASA / ESA / STScI
Iqoqo leenkwenkwezi zePleiades, eyaziwa ngokuba yi "Seven Sisters", "i-Mother Hen kunye neChicks" yakhe, okanye "Iikamela Eziyisixhenxe" yenye yezona zinto zithandwa kakhulu kwizulu. Uyakwazi ukubona le nqoqo evulekileyo evulekileyo ngeaso iso okanye ngokulula kwi-telescope.
Kukho iinkwenkwezi ezingaphezu kwewaka kwi-cluster, kwaye ezininzi zincinci (malunga neminyaka eyi-100 yezigidi ubudala) kwaye ezininzi ziphindwe ngamaxesha amaninzi. Ukuthelekisa, ilanga lethu lineminyaka engama-4.5 bhilidi ubudala kwaye linomyinge ophakathi.
Izazi zeenkwenkwezi zicinga ukuba iiPleiades zenziwe efini yegesi kunye nothuli olufana ne- Orion Nebula . Iqela liyakuthi libekho kwenye i-250 yezigidi zeminyaka ngaphambi kokuba iinkwenkwezi zayo ziqhubeke ngaphandle njengoko zihamba nge-galaxy.
Ukubonwa kweTelescope ye-Hubble Space ye-Pleiades kuye yanceda ukuxazulula imfihlelo eyagcina isayense idinga ukuqikelela iminyaka eli-10; Abaqalayo beenkwenkwezi ukufundela iqela eliqikelelwa ukuba li-400-500 leminyaka-ukukhanya . Kodwa ngo-1997, i-satellite yeHipparcos yayilinganisa umda wayo malunga neminyaka eyi-385 yokukhanya. Ezinye izilinganiso kunye nezibalo zanikezela imida eyahlukileyo, kwaye ngoko izazinkanyezi zasebenzisa uHubble ukulungisa umbuzo. Imilinganiselo yayo ibonise ukuba iqela liyakwenzeka malunga ne-440 yokukhanya-iminyaka. Lo mda obalulekileyo ukulinganisa ngokuchanekileyo ngenxa yokuba unokunceda abanenkwenkwezi ukuba bakhe "umda wokude" usebenzisa izilinganiso kwizinto ezikufuphi.
Umbono weTelescope we-Hubble Space we-Crab Nebula supernova. NASA / ESA / STScI
Enye inkwenkwezi eyintandokazi, i- Crab Nebula ayibonakali isohlo, kwaye idinga i-telescope esemgangathweni. Into oyabona kule foto yeHubble yimizila yeenkwenkwezi enkulu eyaziqhayisa ngokuqhuma kwe-supernova eyabonwa kuqala kuMhlaba kunyaka ka-1054 AD Abantu abambalwa baqaphele ukubonakala kwezulu. Abemi baseMelika, kunye namaJapan, kodwa kukho ezinye iirekhodi ezibonakalayo.
I-Crab Nebula ihlala kwiminyaka eyi-6 500 yokukhanya evela eMhlabeni. I nkwenkwezi eyavuthayo kwaye yayidala yayingamaxesha amaninzi ngaphezu kwelanga. Okushiywe ngasemva kukuba ifu ekhulayo yegesi kunye nothuli, kunye neenkwenkwezi ze - neutron , eyona nkqantosi, eyinkxalabo enzima kakhulu yenkwenkwezi yangaphambili.
Imibala kule mifanekiso yeHibble Space Telescope yeCrab Nebula ibonisa izinto ezahlukileyo ezaxoshwa ngexesha lokuqhuma. Ubuluhlaza kwi-filaments engxenyeni yangaphandle ye-nebula imele i-oksijini engathathi hlangothi, i-green is singly-ionized sulfuri, kwaye ibomvu ibonisa i-oksijini ene-double-ionized.
Iifayili ze-orange zihlala zihlala zenkwenkwezi kwaye ziquka i-hydrogen. Inkwenkwezi ye-neutron ejikelezayo ngokukhawuleza efakwe ngaphakathi kwiphondo ye-nebula yi-dynamo eyenza ukukhanya kwe-nebula kwangaphakathi kwe-bluish. Ukukhanya okwesibhakabhaka kuvela kwii-electrons ezijikelezayo malunga nejubane lokukhanya ezijikeleze imigca yamagnetic ukusuka kwinkwenkwezi ye-neutron. Njengendawo yokukhanya, inkwenkwezi ye-neutron ibamba imitha emibili yemisebe ebonakala ngathi ijikeleza izihlandlo ezingama-30 ngesibini ngenxa yokujikeleza kwenkwenkwezi ye-neutron.
I-Magellanic Cloud enkulu
Umbono kaHubble we-surpnova esele i-N 63A. NASA / ESA / STScI
Ngamanye amaxesha umfanekiso weHubble wento ukhangeleka njengengcezu yobugcisa obungabonakaliyo. Yiyo loo nto ngombono we-supernova otsalayo obizwa nge-N 63A. Lilele kwiGall enkulu i-Magellanic Cloud , eyi-galaxy engumakhelwane eya eMilky Way kwaye ihamba ngeminyaka engama-160 000.
Le ntsalela ye-supernova ihlala kwingingqi yenkwenkwezi kunye neenkwenkwezi ezazityhutyha ukudala lo mbono wasezulwini owawunobungqina obukhulu. Ezi nkwenkwezi zihamba ngokukhawuleza zikhuphe i-nyukliya kwaye zitshatyalaliswa njengama- supernovae amashumi ambalwa okanye ikhulu lezigidi zeminyaka emva kokuba zenze. Le nto yayingama-50 ubukhulu beLanga, kwaye kuyo yonke imihla yobomi bayo obutshanje, umoya wayo oqinileyo wasuka waphuma endaweni, udala "ibhola" kwi-gas interstellar kunye nothuli olujikeleze inkwenkwezi.
Ekugqibeleni, amaza okutshatyalaliswayo, okuphawuleza ngokukhawuleza kunye nama-debris avela kwi-supernova aya kudibanisa nefu elisondeleyo yegesi kunye nothuli. Xa kwenzeka loo nto, inokubangela ukuba kube lula ukujikeleza kweenkwenkwezi kunye nokubunjwa kweeplanethi kwifu.
Izazi zeenkwenkwezi ziye zasebenzisa i-Hubble Space Telescope ukuba zifunde le ntsalela ye-supernova, isebenzisa i- X-ray etheleksi kunye neelasekopu zomsakazo ukujonga imimoya ekhulayo kunye ne-bubble yegesi ejikeleze isayithi lokuqhuma.
Imiqolo emithathu efundwa yiHibble Space Telescope. NASA / ESA / STScI
Enye yeeHebble Space Telescope imisebenzi ukuhambisa imifanekiso kunye nedatha malunga nezinto ezikude kwindalo yonke. Oko kuthetha ukuba ibuyisele idatha edala isiseko semifanekiso emininzi yemigqatsha, loo mizi enamandla kakhulu iindawo ezikude ukusuka kuthi.
Le miqolo emithathu, ebizwa ngokuthi i-Arp 274, ibonakala ihamba ngokukhawuleza, nangona ngokwenene ingaba ngamanqanaba athile. Iimbini zezi zimila , kunye nesithathu (ukuya ngasekhohlo kude) inesakhiwo esicacile kakhulu, kodwa sibonakala sibe nemimandla apho iinkwenkwezi zenza khona (indawo ebomvu nebomvu) kwaye yintoni ebonakala njengeengalo zengqungquthela.
Le milambo emithathu ilala malunga ne-400 million-light-years away from us in a cluster ebizwa ngokuthi i-Virgo Cluster, apho iifilimi ezimbini zenza iinkwenkwezi ezintsha kwizandla zazo ezivuthayo (amaqhosha ahlaza okwesibhakabhaka). Inqwelomoya phakathi libonakala ibinombumba phakathi kwendawo yayo.
Iibalaxi zisasazeka kwindalo yonke kunye namaqela amakhulu, kunye neenkwenkwezi zeenkwenkwezi ziye zafumanisa iindawo ezikude kunama-13.1 bhiliyoni. Ziyabonakala kuthi njengoko ziza kukhangela xa iphela iphela.
I-Section-Cross of the Universe
Umfanekiso osandul 'umva nje owenziwe ngeHibble Space Telescope ebonisa iindidi ezikude kwindalo. NASA / ESA / STScI
Enye yezinto ezithandekayo zikaHubble kukuba i-indalo iqukethe imilambo ngokubhekiselele kuyo. Uluhlu lweendidi zamagqabha ukusuka kwiimpawu eziqhelekileyo zomoya (njengeMilky Way) kwiindawo zokukhanya okungaqhelekanga (njengeMagellanic Clouds). Bembethe kwizakhiwo ezinkulu ezinjengamaqoqo kunye namaqela amakhulu .
Uninzi lwemilaleli kule mifanekiso kaHubble ibhekise kwiminyaka engama-5 bhilidi yokukhanya , kodwa ezinye zazo zihamba phambili kwaye zibonisa amaxesha apho indalo yayincinane kakhulu. I-section ye-Hubble yomnqamlezo wendalo yonke iqulethe imifanekiso ephosakeleyo yemigqomo kwimvelaphi ekude kakhulu.
Umfanekiso ubonakala uphambuke ngenxa yenkqubo ebizwa ngokuba yi-gravitation lensing, into ebaluleke kakhulu kwi-astronomy yokufunda izinto ezikude kakhulu. Le lensisi ibangelwa ukugoba kwexesha lokuhlala kwendawo kunye nemithala emikhulu esondele kufuphi nomgca wethu wokubona kwizinto ezikude. Ukukhanya ukuhamba nge-lens yokuvuthisa kwizinto ezikude kakhulu "kulungele" okuvelisa umfanekiso ophosakeleyo wezinto. Izazi zeenkwenkwezi ziyakwazi ukuqokelela ulwazi oluxabisekileyo malunga neendlwana ezide kude ukuba zifunde ngeemeko zangaphambili kwindalo.
Enye yeenkqubo zentsimbi ezibonakalayo apha zibonakala njenge-loop encinane phakathi kwendawo. Iqulethe imilambo emibini yangaphambili ephosakeleyo kwaye ikhulise ukukhanya kwe-quasar ede. Ukukhanya okuvela kulo mcimbi oqaqambileyo womcimbi, okwangoku uwela emgodini omnyama, uthathe iminyaka eyi-9 yezigidi ukufikelela kuthi - i-sibini kwisithathu seminyaka yonke.
Ama-Afrika-aseMelika kwi-Astronomy and Space
Abaqhubi abaza kubuya njani kwiNyanga
I-Mercury MESSENGER's Final Plunge
I-Soyuz 11: Intlekele kwindawo
URobert Henry Lawrence, u-Jr .: I-Astronaut yaseMelika yokuqala
Ukuguqulwa kwe-Space Suit
Ukuphanda iingxaki zesikhala
Umthetho waseKansas-Nebraska ka-1854
Indlela yokubala i-Backgammon Probabilities
Indlela yokugcina kunye nokulungiswa kweebhuleki zeDrum
Isifundo samalanga onke esiMatarin: "Yintoni" ngesiTshayina
Indlela yokucoca ii-Dive Slates kunye neeNcwadana ezingaphantsi kwamanzi
Isingeniso kwiRhafu yokuTshintshiselana
Indlela yokuguqula iDatazi yokuFumana kwiFomati ye-2010
Quotes Doright Height
Uluhlu lwabafazi baseRiphablikhi kwiSenate yase-US ka-2017-2019
Iingcaphuno ezivela "KwiBell eBolls"
Imfazwe Yehlabathi II: Bell P-39 Airacobra